Dowlad u turta oo aan ku tuman! – Hornafrik Media Network
Ka soo billow hadalka xeer illaaliyaha ee dalabka xasaanad ka xayuubinta xubno kamid ah Baarlamaanka Soomaaliya, illaa weerarka guriga Cabdiraxmaan Cabdishakuur lagu qaaday oo amarkiisa uu bixiyey xeer illaaliayuhu, sida ay u dhigan tahay marka la fiiriyo ah wax isku xiran, laguna lifaaqo hadalkii Raisalwasaare Kheyre ee dulqaad la’aanta dhaliisha xukuumaddu, waxa ay ka wada dhigan yihiin tallaabooyin lid ku ah hal-hayskii uu madaxweynuhu ka sheegay xafladdii caeelma-saarkiisa, February-2017,
Tallaabooyinkaan oo dhan waxa ay madaxda xukuumaddu qaadayaan iyaga oo halmaansan dhammaan wixii uu madaxweyne Farmaajo ku noqday madaxweyne ay Baarlamaanku siiyeen kalsoonidooda iyaga oo metelaya Beelo Soomaali ah oo dhammaantood madaxweynaha ka filaya in uu meesha ay joogaan ku gaaro, kana helaan waxa ay ku hamminayaan, haddii madaxweynuhu ballan qaaday fulinta hal-haysyadan hoose, madaxdii uu awoodda siiyana ay u dhaqmayaan sidii ay doonaan ma qiyaasi kartaa waxa soosocda ee ay tallaabooyinkani riman yihiin, halhaysyada waxa kamid ahaa:
Waxa aan daawaday muuqaalka Xeer illaaliyaha Qaranka Axmed Cali Daahir; oo leh “ Sharciga marka uu soo baxo waxa uu leeyahay dabeecad in uu yahay dhammaan in lawada ogyahay, cid lagayeelayo waxaas in uu faldembiyeed yahay ma ogeyn ma jirto”, tani waxa ay muujineysaa in uu jiro hindise sharciyeed ay xukuumaddu sameysay islamarkaana aan lageyn golayaasha xeerdejinta, kaas oo loo adeegsanayo xarigga iyo xadgudubka hadda socda.
Xukuumaddu waxa ay fulisay dhaqan halis ah oo si toos ah ugu dhacaya una baalmarsan dastuurka, halkii ay ahayd in xukuumaddu noqoto hay’adda ugu horreysa eek u dhaqanta Dastuurka kmg ah ee ay Soomaaliya kuu dhisan tahay waxa muuqata in ay noqotay hay’adda iyada oo leh awood dastuurku siiyey ku tumaneysa islamarkaana si ka fog caqliga iyo garashada u adeegsaneysa awoodda sida dadban ay Baarlamaanku u siiyeen.
Qofna gurigiisa ama meeshii kale ee isaga u gaar ah lama geli karo, lama baari karo, lamana basaasikaro amar garsoore oo sababaysan la’aantiis.
Waxaa waajib ah in amarka garsooraha si toos ah loogu akhriyo degganaha hoyga, baarahana waxaaka reeban ku xadgudubka sharciga.
Habdhaqanka ah adeegsiga ciidanka iyo awoodda dowladdu si loo fuliyo xad-gudub waxa ay qar dheer ka tuurtay dowladnimada tanina waxa ay u egtahay sababtii keentay in maanta ay jiraan dowlado yaryar oo leh astaamo kala duwan balse kawada tirsan dowladda Soomaaliyeed.
Waxa uu dhaqankani ku xadgudbayaa dhammaan Xuquuqda, Xorriyaadka Aasaasiga Ah Ee Qofka oo ku xusan dastuurka KMG.
Inta badan xubnaha golaha xukuumaddu waxba kama oga dhaqanka siyaasadda, sooyaalka dowladnimada Soomaaliya iyo baahida weyn ee maanta ay Soomaaliya u qabto xukun ku dhisan dulqaad iyo isqancin, waana taas sababta ay xukuumaddu u qaadato go’aan qar iska xoornimo ah oo aan ka turjumeyn olilihii madaxweyne Farmaajo, waxaana lagayaabaa in madaxweynuhu ku baraarugsan yahay in dhaqanka xukuumaddu uu sii luminayo hanka weyn ee lo ohayo madaxweyne Farmaajo.
Sidaas oo kale waxa jira xubno kamid ah xukuumadda oo madax sare noqday iyaga oo aan dalkaba joojin wax ka bada 6; bilood, waxa ay qabteen xilal sare iyaga oo aan waxba kala socon dareenka dadweynaha, intaas waxaa dheer sida aan ka helnay ilo kala duwan waxa jira xubmo kamid ah ciidamada nabadgelyada oo ka soo goostay xarakada Alshabaab, kuwaas oo qabtay xil sare oo nabadgelyo, waxa ay yimaadeen ama ay isa soo dhiibeen iyaga oo aan ku qancin dowladnimo Soomaaliyeed balse ku qasban in ay helaan meel ay kuu nabadgalaan, taasina waxa ay sababtay mashaakil badan oo ka jira dhanka hab-dhaqanka Ammaanka.